Sonto 6 Juni 2021
Ikhalenda I-Waterwheel iyikhalenda elinezinhlangothi ezintathu elenziwe kusuka kumathanga ayisithupha ahlanganiswe ngesimo se-waterwheel. Jikelezisa ikhalenda eyingqayizivele yokuma yodwa yedeskithophu yakho njengewashi lamanzi inyanga ngayinye okufanele ulisebenzise. Impilo enomklamo: Imiklamo yekhwalithi inamandla wokushintsha isikhala futhi iguqule izingqondo zabasebenzisi bayo. Banikeza induduzo yokubona, ukubamba nokusebenzisa. Zihlotshiswe ngokukhanya nezinto zokumangala, zicebise isikhala. Imikhiqizo yethu yoqobo yakhelwe kusetshenziswa umqondo "Wokuphila Nokwakhiwa".
Ikhalenda Ikhalenda eliyingqayizivele nelidlalayo lokuphakamisa lakhiwa futhi lenzelwa ukwakhiwa kwamaphepha we-portal site Goo harnesses iphepha futhi linikeza ukucabanga kokusebenza. Lolu hlobo luka-2013 luyikhalenda kanye nomhleli wesheduli ogoqelwe kwaba yindawo enokubhala ezinhlelweni zonyaka nezinhlelo zansuku zonke. Iphepha elincanyana lekhwalithi lekhalenda nephepha eliphansi eliphansi elilungile kumanothi wokubhalwa komhleli wesheduli bekhethwe ngokucophelela futhi umehluko owakhiwe owafanelana njengengxenye yomklamo wekhalenda. Isici esingeziwe somhleli wesheduli ogcwalisa ulenza liphelele njengekhalenda ledeski ledatha elisebenziseka kalula.
Lwesihlanu 4 Juni 2021
Ikhalenda Ngokwe-kaleidoscope-efana nemfashini, lokhu kuyikhalenda elinemidwebo yokusika engaphezulu edonswe ngamaphethini we-multicolor. Idizayini yayo ngamaphethini wombala angaguqulwa futhi enziwe umuntu uqobo ngokushintsha nje ukuhleleka kwamashidi kubonisa imisindo yokudala ye-NTT COMWARE. Isikhala sokubhala se-Ample siyanikezwa futhi imigqa ebuswayo ibheka ukusebenza okubenza iphelele njengekhalenda yesheduli ongafuna ukuyisebenzisa ukuhlobisa isikhala sakho.
Lwesine 3 Juni 2021
Ukufakwa Kwehembe Le emaphaketheni ihembe lizibeka eceleni lokupakisha okujwayelekile ngokungasebenzisi noma yini ipulasitiki. Sisebenzisa umugqa wokudonswa kwemfucuza okhona kanye nenqubo yokwenza, lo mkhiqizo awugcini nje ngokwenza izinto ezilula, kodwa futhi ulula kakhulu ukuwulahla, izinto zokuqala eziyizakhi ezingenzi lutho. Umkhiqizo ungaqala ucindezelwe, bese ukhonjwa ngomkhiqizo wenkampani ngokusika usiko nangokuphrinta ukudala umkhiqizo oyingqayizivele wobumbano obukeka futhi ohlukene futhi uyathandeka. I-Aesthetics nesibonisi somsebenzisi zabanjwa ngokubheka okuphezulu njengokuqina komkhiqizo.
Lwesithathu 2 Juni 2021
Ikhonsoli I-Qadem Hooks iyingxenye yobuciko enomsebenzi we-console ophefumulelwe yimvelo. Ihlanganiswa nezingwegwe ezindala ezahlotshiswe ngokuluhlaza okotshani obudala, ezazisetshenziswa kanye neQadem (isichibi esidala sokhuni sangemuva emuva) ukuthutha ukolweni kusuka kwelinye idolobhana ukuya kwelinye. Izingwegwe zixhumene neBhodi lakudala le-Wheat Thresher, njengesisekelo futhi seliqediwe ngenhla yengilazi ngaphezulu.
Ikhonsoli Isigaxa esiyingqayizivele esenziwe ngokhuni olupendiwe ngokuqedwa kwamatshe, sibonisa i-grumb yekhofi yangempela eyiqiniso esibuyela emuva esikhathini se-ottoman. Ikhofi epholile yaseJordanian (iMabrada) yenziwa kabusha futhi yaqokelwa ukuba ime njengenye yemilenze ngaphesheya kwekhonkolo lapho kuhlala khona i-grinder, nokwakha ucezu olujabulisayo lwefoyer noma igumbi lokuhlala.
Flow With The Sprit Of Water Ubuciko Bomphakathi Lwesihlanu 30 Julayi
Solar Skywalks Ukusebenza Kwamandla Kwamabhuloho Ezinyawo Kuyizinhlobo Lwesine 29 Julayi
Alignment to Air Izithomba Ze-3D Lwesithathu 28 Julayi
Ikhalenda Ikhalenda Ikhalenda Ukufakwa Kwehembe Ikhonsoli Ikhonsoli